Indlela esiphatha ngayo izinsana gipertonus
Lapho udokotela wezinzwa uthola gipertonus izinsana - it is hhayi ngaso sonke isikhathi ukuba abazali ukukhathazeka. Into yokuqala ukuthola ukuthi inkinga nendlela yokubhekana naso. Ngezinye izikhathi izingane zinezikhathi umbungu pose, lapho baye ibheke izibambo ngezibhakela esifubeni, imilenze bent futhi kancane ngaphandle bacondze etindzaweni letehlukene, ikhanda lakhe aphonswe emuva, futhi izinyawo inyanga inhlendla. Ukuze leli qembu kungaba umzimba nge ngezinga elithile okungenzeka ukunquma hypertonicity e neonates. Ingane iqala ngenkuthalo bendlulela engu-izinyanga ezintathu, izinyanga eziyisithupha ngaphambi imisipha kancane kancane uphumule. Kodwa ngezinye izikhathi ukucindezeleka luyaphela.
Hypertonicity ezinsaneni akusona isifo. Kodwa-ke kuwuphawu lokuthi imvuthuluka ne isimiso sezinzwa akukhona konke kulungile. Ukuqinisekisa inkinga, kwezinye izimo, ukwenza i-ultrasound ingqondo. Uma ingane yakho izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha, udokotela angase amiswe tomography. Kodwa ukusetshenziswa kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane kuyaqabukela yakhetha. Kuvele udokotela onolwazi kungakwenza ukunquma hypertonicity ezinsaneni ngesikhathi Luhlolo wokuqala, esiqhutshwa ukufeza ngenyanga eyodwa. Njengoba ukubambezeleka eqondiswa nzima ekuthuthukisweni motor, therapy bayonikezwa isazi sezifo zezingane ngokushesha. Hypertonicity angasuswa ngaphandle ukusetshenziswa kwezidakamizwa, lokhu kuzosiza ukubhukuda, ukubhucungwa, eziphumulele obhavu kanye Physiotherapy.
Isizathu esiyinhloko hypoxia fetus lapho utero kwenzeka ukushoda oxygen. Ukuze agcizelele izicubu imvuthu futhi enganeli ukugula eqinile ekuseni e senyanga yokuqala sokukhulelwa, umama okhulelwe isifo njalo, lesizalo ithoni. Le nkinga futhi kubangela igazi.
Izinqubo contraindicated e hypertonia:
1. diving emanzini, kodwa ukubhukuda ingane ungaba njengawo futhi kufanele ube. Lokhu kufanele ziqashwe ngokucophelela abazali abantwana abenziwa idluliselwe hypoxia ngesikhathi sokuzalwa.
2. umzimba Dynamic, isebenze imvuthuluka umzimba, futhi ekujabulisayo isimiso sezinzwa. Ngakho esikhundleni sokuba sibazise, kuphela kuletha ukulinyazwa ingane.
Kukhona ezinye izimpawu ukuthi akunakugwenywa, njengoba singasebenzi imisipha ukungezwani kuphela kubonisa khona Hyper:
- abampofu ubuthongo futhi wince ngesikhathi Umsindo omncane;
- ukukhala abangenangqondo ngokuthuthumela kwesilevu, izindebe bluish nezinzipho;
- inhloko njalo aphonswe emuva, izandla clenched ku ngezibhakela.
Hypertonicity wengane: Ukwelashwa
Le nqubo yokwelapha ihlanganisa inkambo massage ehlanganisa 15-20 izikhathi. Kumele okuphindaphindiwe ngezikhawu 1-2 izinyanga ukuqedela yokutakula. Uma usuqedile kahle, imvuthuluka kuzokhulisa umzimba. Uma intuthuko okuqaphelekayo, kufanele ushintshe masseur. Ungase futhi uxove umzimba siqu baby yakho. Lapha kubalulekile ukuba athobele isimo esisodwa esibalulekile - zonke izenzo kufanele kube ithenda futhi flavorful. Ikhambi gipertonus izingane ngeke ukudicilela njengoba ephumula imisipha kuphela kodwa futhi wonke umzimba. Toddler usungaqala ageze kubhavu omkhulu, lapho eseneminyaka amasonto amathathu.
Ukwelashwa isithuthwane kwa-Israyeli: indlela nobuchwepheshe
Ubuhlungu Anal ngemuva kokubeletha kanye hemorrhoids
PEP ingane: ukuthi siyingozi kangakanani?
Ingcindezi High phansi: yini okufanele uyenze?
Indlela yokufunda ukulawula imizwa yabo futhi ziwaqonde
Vodka "Bulbash" - ugologo omkhulu Belarusian
Isokhethi AMD: Uhlolojikelele, izici futhi zonke izilimi
Socio-Pedagogical umsebenzi ekunakekelweni kwengane
"Utkino Indlu yasemakhaya": lapho, incazelo, isithombe
Ikhandlela Church - umkhululi eqinile kuzo zonke ezimbi
Korean buso ebusweni: kuzibuyekezo, izintengo
Ngo ngamuphi unyaka kwenzeka lokhu kuhlasela e Budennovsk?
Beer yokudlela "Ustyug Omkhulu" (Vologda): ukubuyekezwa, izincazelo, amamenyu kanye nokubuyekeza
Inkundla iyisixazululo esiphumelelayo sokuhlobisa isayithi lakho
Ngabe amaprotheni kubi kuwe?